Home Opinion Maxaa Keenay In Golaha Wakiiladu Dur-duro Ku Ansixiyo Mooshin Aan Laga Doodin?
Iyadoo marka horeba ay sharci darro ku shaqaynayeen ganacsatadda soo dejisa baabuurta oo aanu jirin mid qudha oo wasaaradda Hawlaha guud ka haysta rugsadda ogolaanshaha ee cadaynaysa in ay ka ganacsadaan gaadiidka, ayaa haddana mar labaad si jujuub ah Golaha Wakiiladu u joojiyeen lacagta adeeg ah ee lagu hubinayo bed-qabka gaadiidka ay dalka soo gelinayaan.
Mooshinkaasi ay Golaha Wakiiladu ku laaleen Sabtidii todobaadkan lacagta adeega ah ee lagu hubinayo bed-qabka gaadiidka ayaa u muuqday mid lagu deg-degay, isla markaana aan la soo marin dariiqii sharciga ahaa, iyada oon xildhibaanadda Golaha loo qaybinin mooshinkaasi lagu joojinayay lacagta adeega ah ee Wasaaradda Hawlaha Guud ku soo rogtay baabuurta lala soo degayo in laga qaado.
Waxa cod loo qaaday mooshinkaasi iyadoo aan la dhegaysan warbixintii ay dhawaan magaaladda Berbera ka soo diyaariyeen Guddiga dhaqaalaha ee wakiiladdu oo kulamo gooni gooni ah la yeeshay Ganacsatada iyo xafiiska adeegan bixinaya ee ku yaalla dekadda Berbera.
Sidoo kale, waxay ahayd in Shirgudoonku la Taliyaha sharciga u dhiibaan si uu wakhti kooban ugu soo darso in mooshinkani waafaqsan xeer hposaadka Golaha iyo in kale. Iyadoo aan dariiqii mooshinkaba la marin ayaa xildhibaanno si gaar ah iskugu il-jabiyay iyo shirgudoonka oo balamay ay markiiba cod geliyeen oo ay yidhaadeen mooshinkaasi waa la ansixiyay oo maalintii la keenayba dur-duro lagu ansixiyay.
Waxa la sheegay in xildhibaanaddii mucaaridka ah ee qorshahani dabadda ka riixayay in ay lacag soo siiyeen macradadda baabuurta soo dejiya,taasi ayaanna ah sababta keentay in mooshinkaasi maalin gudaheed lagu ansixiyo. xildhibaanadaasi oo intooda badan ahaa kuwa ku abtirsada xisbiga Waddani, oo uu hormood u ahaa xildhibaan Siciid Cilmi Rooble, oo isagu ku caan-baxay inuu masaariifsado hadba mooshin ama xeer uu lacag ka helayo.
Waxaana la sheegay in codkii ay golaha wakiiladu ku laaleen lacagta adeega ah ee lagu hubinayay bed-qabka gaadiidka uu ahaa qorshe ay isla ogaayeen Guddoomiye Cirro iyo xildhibaanadda xisbigiisa ka tirsan, isla markaana ay taasi sababtay in la afduubay lana jujuubay mudaneyaashii kale ee dooda ka qabay arrintaasi gaar ahaan gudidda dhaqaalaha golaha wakiiladda oo aan lagu camal falin arragtidii Guddiga dhaqaalaha.
Yaa Leh Sharcinimadda in La Hubiyo Bed-qabka Gaadiidka Dalka La Keenayo?
Sida uu qeexayo xeerka wadooyinka Somaliland qoddobkiisa 47aad, wasaaradda Hawlaha Guud, Gaadiidka iyo Guriyayna waxa ay mas’uuliyadi ka saaran tahay in ay baadho, qiimayso, eegto, bed-qabka iyo tayadda baabuurta dalka la keenayo marka ay dekedda ka soo degayaan, iyadoo u jeedadu tahay si aanay dalka u iman baabuur dug ah iyo kuwo aan faa’iido kale dalka iyo dadka midnaba u lahayn.
Hase yeeshee golihii sharci dejinta qaranka u qaabilsanaa ayaa si aan ka fiirsasho lahayn waxay mar qudha u qaateen go’aanka ay ku laaleen lacagta aadka u yar laga qaadayo ganacsatadda marka la hubinayo bed-qabka gaadiidka ay dalka keenayaan, waxaanay mudaneyaasha golaha Wakiiladdu gaar ahaan kuwa mucaaradka ah ay beeniyeen xeerkii wadooyinka ee ay iyagu hore u ansixiyeen oo sheegayay in wasaaradda Hawlaha Guud ay waxyaabaha la xidhiidha gaadiidka uga masuul tahay qaranka.
Maxay tahay faa’iidadda ku jirta in la hubiyo bed-qabka gaadiidka?
Sida aynu ognahay baabuurta ugu badan ee dalkeena la keeno oo u badan kuwa raaxadda ayaa ah qaar dug ah ama aanay tayadoodu wanaagsanayn, isla markaana muddo badan lagu soo isticmaalay Wadamadda laga keenay, iyadoo ganacsatada baabuurta soo dejiyaa ay qiimo jaban ku soo iibsadaan baabuurta Duuga ah, balse halkii ay soo dejin lahaayeen gaadiid tayo leh oo bed-qaba ka doorbideen in ay kuwan duuga ah ee qiimahoodu hooseeyo soo iibiyaan.
kuwaasi oo aan eegaynin dhibta iyo khasaaraha ay bulshadda ku keenaan gawaadhida baaliga ah iyo kuwa ay tayadoodu xun tahay, hase yeeshee waxa keliya oo ay ka eegaan dhinaca ay iyaga faa’iidadu ugu jirto si macaash badan uga helaan gaadiidka duuga ah oo ay qiimo jaban ku soo iibsanayaan, marka ay dalka gudihiisa ku iibinayaana ay siiyaan laba jibaarka intii laga soo siiyay.
Qorshana ay Wasaaradda Hawlaha Guud ku baadhayso bed-qabka baabuurta ayaa ah mid faa’iido weyn u leh dalka iyo dadka, sababta oo ah waxaynu si buuxda ula wada soconaa dhibaatadda ay baabuurta bulshadda ku hayaan, kuwaasi maalin walba galaafta nolosha dad aad u badan, waxaana la hubaa in shilalka gaadiidka ee sii kordhaya inay sabab u yihiin baabuurta la keeno dalkeena oo ah kuwo aan cusbayn, oo xataa ay mamnuuc ka tahay in wadamada qaar lagu isticmaalo sida dalalka aynu jaarka la nahay.
Sababta ay u diideen ugana soo hor jeedsadeen ganacsatadda gaadiidka soo dejisa in la baadho bed-qabka gaadiidka ayaa muujinaysa in aanay doonaynin in la ogaado baabuurta ay dalka keenaan oo ah kuwo muddo badan lagu soo isticmaalay meelaha laga keenay, iyadoo haddii la baadho 99% ah kuwo duug ah iyo kuwo aan dalkeenaba lagu isticmaali karin, maadaama oo aynaan wadooyin fiican lahayn, sidaas darteed, sidaas darteedna iyagoo taasi ka hortegaya ay si ku kaceen arrimahani.
Waxaanay xubnaha ka ganacsadda gaadiidku isku koobeen in ay dalka keenaan baabuur aan dalka iyo dadka midnaba faa’iido u lahayn, kuwaasi oo u badan gawaadhida raaxadda, iyadoo aanay marnaba dhicin ay soo dejiyaan baabuurta waxtarka leh sida kuwa xamuulka, Cagaf-cagafyadda iyo baabuurta manfaca u leh dadka.
Sharci Daradii Hore ayay ku Dareen Mid Labaad:
Sidoo kale, ganacsatadan gaadiidka soo dejiya ma jiro mid qudha oo Wasaaradda Hawlaha Guud ka haysta ruqsadda ogolaanshaha ee soo dejinta baabuurta, kuwaasi oo dhamaantoodba ay sharci darro tahay in ay baabuur soo dejiyaan, isla markaana iska indho-tiray shuruucdii dalka.
Kuwaasi oo ah niman faa’iido doon ah oo aan eegaynin dhibta joogtadda ah ee umadda ku hayaan baabuurta duuga ah eeay dadka ka iibiyaan, iyagoo markii horeba ay sharci darro ahayd inay gaadiid soo dejiyaan, dawladuna ku khasabta ama ku xidho shuruud ah inay ruqsada ogolaanshaha ee cadaynaysa inay baabuur soo dejiyaan lagu xidho, ayaa hadana markii lagu soo rogay in la baadhayo bed-qabka gaadiidka ay soo dejinayaan oo ah mid sharci ah in xataa ay soo adeegsadaan xildhibaanada wakiiladda ee mucaaridka ah oo ku caanbaxay inay lacag dhaafsadaan wax kasta oo dalka halis ah.
Si kastaba ha ahaatee ansixinta golaha wakiiladu ay ku faxaseen in laga daayo lacagta adeega ah ee lagu baadhayo baabuurta dekadda ka soo degaya ayaa u muuqda mid dalka u horseedaya inay sii laba jibaarmaan dhibaatadda ay tayo-xumaanta gaadiidku ku hayso bulshadeena, isla markaana wadadda u sii xaadhay in xubnaha ka ganacsadda baabuurta ay ku sii jiraan macaashka xad-dhaafka iyo dul-saarka aan cidna ogayn ee ay umadda ku qabaan.
By: Faallo: Khadar Cabdi Muuse